Trump oo wajahaya culeys weyn kadib markii uu iscasilay wasiirkiisii difaaca - Halbeeg News
Trump oo wajahaya culeys weyn kadib markii uu iscasilay wasiirkiisii difaaca
WASHINGTON (HALBEEG)- Wasiirkii gaashaan-dhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii ay isku khilaafeen Madaxweyne Trump in ciidamada Mareykanka laga soo saaro dalalka Suuriya iyo Afgaanistaan isaga oo warqad uu qoray ku sheegay in Pentagon-ka uu ku fiicanyahay qof si fiican ula qabsaday aragtiyaha Donald Trump.
Iscasilaadda Jeneraalkan howlgabka ka noqday ciidanka badda ee Mareykanka, ayaa timid maalin kadib markii Madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in uu ciidamadiisa kala soo baxayo Suuriya, arrinkaasi oo amakaag ku noqotay xulafada Mareykanka iyo sidoo kale la taliyeyaashiisa oo uu kamid yahay Mattis oo kasoo horjeeday arrinkan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in ay ka guuleysteen Daacish inkastoo ay Pentagon-ka iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykankuba ay muddo bilooyin ah sheegayeen in dagaalka ka dhanka ah Daacish aanu weli dhamaanin.
Donald Trump ayaa Pentagon-ka amar ku siiyay in ay soo diyaariyaan qorshihii Afgaanistaan looga soo saari lahaa kala bar ciidamada Mareykanka ah ee dalkaasi ku sugan, arrinkan oo ay saraakiil badan oo Mareykan ah u arkaan mid qalalaase gelin kara dalka.
Khilaafkan oo ay wehlinayaan arrimo kale ayaa sababay in uu Trump waayo xubin muhiim ah oo ka tirsan golihiisa wasiirada, waa Jim Matt oo kasbaday ammaan badan oo gudaha iyo dibadda Mareykankaba uga timid, balse waxaa sii kordhiyay khilaafka u dhexeeya isaga iyo Donald Trump oo looga bartay in uu ka shakiyo xulafadiisa iyo inuu howlgallo ka fuliyo dibadda dalka Mareykanka.
Jim Mattis ayaa warqaddii uu iska casilay ku sheegay qaar kamid ah wax yaabaha ay ku kala duwan yihiin Donald Trump, warqadaan oo uu Khamiistii u gudbiyay Aqalka Cad ayaa noqotay midii ugu horeysay oo si rasmi ah uu isku casilo mid kamid ah golihiisa wasiirrada arrin ku saabsan maamul, mise ahan wasiirkii ugu horreeyay oo shaqada banneeya.
Janraaalkan howlgabka ah ayaa sheegay in awoodda Mareykanku ay tahay awoodda xulufadeeda loona baahanyahay in la tixgeliyo, waxa uuna intaasi ku daray in indhaha lagu hayo khataraha ka iman kara kooxaha argagaxisada sida kooxda Daacish.
“Waa in aan sameynaa wax walba oo suurta gal ah si aan oo horumarino hab caalami ah oo la jaanqaadaya ammaanka, barwaaqada iyo qiyamka Mareykanka, wax aanu xoog ku leennahay dadaalka iyo garab istaagga xulafadeenna” ayuu yiri Jim Mattis oo aan warqsdiisan hal marna ku amaanin Trump.
Madaxweyne Trump ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay la tacaalayay isku heynta kooxda kala shaqeysa hoggaanka dalka iyadoo tira badani shaqada ka tageen.
NISA oo gacanta ku soo dhigtay xubin sare oo ka tirsan al-Shabaab
Ra’iisul wasaare Khayre oo hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee KG